Barnaamijka McKnight's Pathway Schools Initiative Sunset
Sanadkii 2011, McKnight wuxuu hirgeliyay himilooyin higsan - si aad ah u kordhiya boqolleyda saddexaad ee akhristayaasha darajada ee Twin Cities. Laga soo bilaabo markaa, hay'adda waxay kaashatay koox ka mid ah xulashooyinka degmooyinka iyo charter ee iskuulada Twin Cities, Machadka Machadka Magaalooyinka ee Chicago, iyo qiimeyn madax-bannaan, SRI International, si loo gaaro himiladaan iyada oo la jaanqaadka iyo hagaajinta tayada hoggaanka dugsiga iyo casharrada akhris / qorida ee fasalka PreK-3. Waxaan ku dadaalay dadaalkaas Barnaamijka "Pathway Schools", ka dib markii si taxadar leh loo eego, guddiga maamulka McKnight ayaa sameeyey go'aanka adag ee ah in la qeexo hindisaha dhammaadka muddada deeq-bixiyeyaasha ee waqtigan xaadirka ah - sannadka 2017-18 inta badan.
Ujeedooyinka la wadaago, Waxbarashada La wadaago
Waqtiga ay soo gabagabeynayso, Barnaamijka Pathway Schools ayaa ku calaamadeynaya wada-shaqeyn todobo sano ah oo u dhaxeysa McKnight iyo la-hawlgalayaasheeda. Foundation wuxuu kufaraxsan yahay dadaalka badan ee waxqabadka leh, welina u mahad celineynaa dareenka ay muujiyeen asxaabteena jimicsiga ee Pathway Schools, UEI, iyo SRI. Barnaamijka "Pathway Schools Initiative" wuxuu kordhay kaqaybqaadashada ardayga PreK ilaa Kindergarten, wuxuu wanaajiyey isticmaalka xogta si loo ogaado barista, isku xirnaanta xiriirka ka dhexeeya barnaamijyada PreK iyo K-3, iyo xoojinta awoodda hoggaaminta ee kaqeybgalka dugsiyada.
Isla mar ahaantaana, McKnight wuxuu qirayaa in dadaalka kaliya uu horey u mariyey himilada ugu dambeysa: korodhka kobcinta aqoonta iyo aqoonta ardayda. Waannu niyadjabnay, laakiin ma niyad jabin, xaqiiqadan. Maaddaama ay u dhowdahay, qorshahani wuxuu fursad u helayaa in uu ka tarjumo waxa aan bartay, iyo inaan casharadan u adeegsano si aan ugu sheegno shaqada mustaqbalka McKnight.
Hagaajinta Dugsiga waxay u baahan tahay hoggaan madaxbannaan, hogaamiye xasilloon iyo siyaasado wada jira Horumarinta dugsiga waa suurtogal, sababtoo ah tusaalooyin badan ayaa muujinaya. Hase yeeshee, badankood tusaalooyinkan ayaa ah kuwo ku-tiirsan goobaha iskuulada ee keliya oo u muuqda inaysan dhicin sababo la xiriira degmada iyo / ama xaaladaha gobolka, laakiin in kasta oo iyaga ah. Inta badan barnaamijka, waxaan sidoo kale si joogta ah u aragnay macalimiinta iyo hoggaamiyeyaasha Dugsiyadeena Pathway ee ku dhibtoonaya in ay isku dheelitiraan baahida qorshaha ee tartanka, badanaaba iskahorimaadka, waxay ka dhigan tahay siyaasiyiinta iyo degmooyinka gobolka. Xafiiska dhexe ee hoggaanka hoggaanka, iyo natiijada ka soo baxda mudnaanta degmada, waxay kordhisay isbeddelkan. Iskudhaca sareeya ee macalimiinta iyo hoggaamiyeyaasha Dugsiyada Pathway - oo ah midka guud ee dugsiyada magaalooyinka - ayaa sidoo kale hoos u dhigay wax-qabadka wax-qabadka.
Magaalooyinka Twin ayaa sii kordhaya oo sii kordhaya - taasina waa wax fiican. In ka badan konton boqolkiiba ardayda dhigata Dugsiyada Pathway ee kaqaybqaata waxay ku hadlaan luqad aan Ingiriisiga ahayn guriga. Maadaama dhaqamada kala duwan ee kala duwan ay doortaan inay sameeyaan Minneapolis-St. Bawlos gurigooda, bulshooyinkeena waxay ka faa'iideysanayaan siyaabo badan oo laga helo kaalmooyinka bulshada iyo dhaqaalaha. Tusaale ahaan, waxaan ognahay in carruurta laba luqoodlayaasha ah ay muujiyaan xirfado farsamo oo awood leh, sida awoodda ay u leeyihiin in ay fiiro gaaraan oo ay maamulaan hawlaha, marka loo eego carruurta kelidood ah, iyo baadhitaanada dhowaan waxay soo jeediyaan in ardayda laba luqoodlayaasha ah ay ugu dambeyntii ka dhigayaan ardayda isku midka ah ee fahamka akhriska (Kamenetz, 2016).
Carruurtanu waa xubno muhiim ah oo ka tirsan xoogagga shaqaalaha mustaqbalka ee Minnesota, waxaanan arki karnaa faa'iidooyin dheeraad ah haddii ardayda yaryar ee ardayda yaryar ay si fiican uga shaqeeyaan dugsiyadeenna. Macallimiinta fasalka iyo hoggaamiyeyaashu waa inay ku qalabeeyaan xirfadaha ay ubaahanyihiin si ay u taageeraan horumarinta tacliinta iyo luqadaha carruurnimada, labadaba Ingiriis iyo luuqadahooda guriga. Maalgashiga Dadweynaha Minnesota ee sii kordhaya ee ardayda baraneysa luqadaha ayaa ka caawin doona xaqiijinta in gobolku uu dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba si fiican u jilicsan karo sanadka soo socda.
Isbeddelka isbeddelka wuxuu u baahan yahay lahaanshaha deegaanka. Waan isticmaalnay Qiimaynta Barashada Dugsiyada Pathway sida fursad ay ku qabato muraayad kor u qaadaysa deeq-shaqsiyadeed iyo inay ka hortagto xaddiga saameynta McKnight ee saamiga maalinlaha ah ee dugsiyada. Haddii bulshadeenu rabto in ay ka baxdo korodhsiin si ay si dhab ah u bedesho barashada iyo waxbarida dugsiyadeena, ka dibna dib u habeyn laguma sameyn karo sida taxane taxane ah oo ay ku qaadeen maalgeliyayaasha iyo lammaaneyaasha dibadda. Taa baddalkeeda, barayaasha, qoysaska, iyo jaaliyadaha waa in la xoojiyaa si loo hormariyo loona hirgeliyo riyooyin isku dhafan oo loogu talagalay guusha ardayga. Wada-hawlgalayaasha dibeddu waxay kicin karaan tamar iyo inay bixiyaan taageerooyin wax dhisid oo muhiim ah, laakiin isbedel joogta ah waa in lagu horseedaa heerka dhulka.
Marka, maxaa xiga McKnight? Marka hore waxaan diirada saari doonaa sidii loo hubin lahaa kala-guur siman oo ka yimaada Iskuulada Pathway Initiative. Shaqaalaha McKnight waxay sidoo kale sii wadi doonaan inay ka tarjumaan waayo-aragnimadayada leh qorshaha, si loo baadho muuqaalka waxbarashada, iyo - ugu muhiimsan - si taxadar leh u dhegeysta shuraakadayada bulshada dhexdeeda.
Waxaan dhegeysan doonnaa si aan u fahanno halka ay jirto fursado lagu hormarinayo horumar wax ku ool ah, halkaas oo ay jiraan baahi loo qabo in la buuxiyo, iyo marka fikradaha fekerka iyo wadaagida la wadaago ay bedeli karaan nidaamyada u adeega carruurteena.